सिम्रिक एयरले ल्यायो अत्याधुनिक हेलिकप्टर
२०७२ कार्तिक १७ मंगलबार, काठमाडौं । सिम्रिक एयर प्रालिले फ्रान्सेली निर्माता कम्पनी एयरबस हेलिकप्टरद्वारा निर्मित एउटा अत्याधुनिक हेलिकोप्टर ल्याएको छ । सिम्रिक एयरले गत २२ जुलाईमा एयरबस हेलिकप्टर कम्पनी सिंगापुरसँग ३ वटा अत्याधुनिक हेलिकोप्टर खरिद गर्न गरेको सम्झौता अनुसारको पहिलो हेलिकोप्टर नेपाल आइपुगेको हो । यो हेलिकोप्टर सिम्रिकले २५ लाख ५० हजार डलर (करिब २६ करोड रुपैयाँ)मा खरीद गरेर ल्याएको सिम्रिक एयरका अध्यक्ष क्याप्टेन रामेश्वर थापाले बताए । उनका अनुस ... बाँकी अंश»
तिहारको आगमनसँगै बजारमा चहलपहल
२०७२ कार्तिक १७ मंगलबार, काठमाडौं । नेपालीहरुको दोश्रो ठूलो चाड तिहार नजिकिएसँगै राजधानीका मुख्य बजारमा चहलपहल बढेको छ । असन, मखन, त्यौड, हनुमानढोका, मरु आदि ठाउँमा तिहारका लागि चाहिने मखमलि फूल, हाँसको अण्डा, सुकेको माछा, टिका तथा पुजाका सामान बिक्री तथा किनमेल गर्नेको भीड लागेको छ । तिहारमा नेपालीहरुले लक्ष्मी पूजा, गोबर्धन पूजा तथा भाइटिका मनाउँछन भने नेवार समुदायले म्हःपुजा विशेष उत्सवका साथ मनाउने गर्छन । मूल्य वृद्धि र भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीका कारण खाना प ... बाँकी अंश»
सेज सञ्चालनमा आउने
२०७२ कार्तिक १७ मंगलबार, बुटवल । उद्योगमन्त्री सोमप्रसाद पाण्डेयले भैरहवामा रहेको देशको एक मात्र विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) एक वर्षभित्र सञ्चालनमा आउने बताएका छन् । प्रेस चौतारी नेपाल रुपन्देहीले मंगलबार बुटवलमा आयोजना गरेको पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा उनले सेज सञ्चालनका लागि नीतिगत परिवर्तन गरेर भए पनि चाँडै सञ्चालनमा ल्याइने स्पष्ट पारे । उनले सेज स्थापना भएका क्षेत्रमा आवश्यक पूर्वाधार विद्युत्, सडक पानी र सुरक्षा व्यवस्थालगायत व्यवस्थापन गरेर उद्योग आउ ... बाँकी अंश»
सुनौलो भविष्य बोकेको कोरला नाका
२०७२ कार्तिक १६ सोमबार, निर्मल खत्री, म्याग्दी। चीनसंग सीमा जोडिएको मुस्ताङको कोरला नाकासंग सुनौलो भविश्य जोडिएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सञ्चालन गर्न धौलागिरिका ब्यवसायी, सरोकारवाला, राजनीतिक दल र धौलागिरीबासीले माग गरेका छन् । नेपाल माथि भारतले गरेको अघोषित नाकाबन्दीको कारणले देशभरको जनजीवन प्रभावित भएको अवस्था नाका सञ्चालन गर्न सके दैनिक उपभोग्य सामान आयात–निर्यातमा सहज हुने सरोकारवालाहरुको भनाई छ। करिव १२ बर्षदेखि बन्द अवस्थामा रहेको नाका सञ्चालनका लाग ... बाँकी अंश»
पेट्रोलियम पदार्थ बोकेका ट्याङ्कर काठमाडौँ जाँदै
२०७२ कार्तिक १६ सोमबार, धुन्चे (रसुवा)। चीनको केरुङबाट पेट्रोलियम पदार्थ बोकी आएका ट्याङ्करहरु आज बिहान ९:३० बजे धुन्चेबाट काठमाडौँका लागि प्रस्थान गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी प्रमुख अवदेश विष्टका अनुसार १२ वटा ते बोकेका ट्याङ्कर काठमाडौँका लागि प्रस्थान गरेको र चारवटा ट्याङ्कर तेल भर्नका लागि रसुवागढी नाकाबाट केरुङ गइसकेका छन् । पहिलो चरणमा धुन्चेबाट १२ वटा ट्याङ्करमा एक लाख ११ हजार ५०० लिटर पेट्रोलियम पदार्थ काठमाडौँ गएको बताइएको छ । ती सबै ट्याङ्कर आज ... बाँकी अंश»
तिहारका लागि चिनियाँ सामान भोलिदेखि भित्र्याउने
२०७२ कार्तिक १५ आइतबार, रसुवा। नेपालीको दोस्रो ठूलो चाड तिहारका लागि स्थानीय व्यवसायीले चीनबाट पहिलो खेपमा भोलिदेखि स्याउ नेपाल भित्र्याउने तयारी गरेका छन् । नेपालमा भित्र्याउने स्याउ केरुङसम्म आइपुगेको र नेपाली कन्टेनरले भोलि रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्र्याउने तयारी भएको नेपाल–चीन केरुङ व्यापार सङ्घका सचिव मुकुन्द पौडेलले जानकारी दिनुभयो । यस्तै, नेपाली व्यापारीले आयात गरेका चिनियाँ सामग्री चीनको सिगात्सेबाट केरुङतर्फ आउनेक्रम सुरु भएकाले काठ ... बाँकी अंश»
बारपाकमा बढे होटल
२०७२ कार्तिक १५ आइतबार, गोरखा । गत वैशाख १२ गते गएको भूकम्पको केन्द्रबिन्दू बारपाक हेर्न आन्तरिक तथा विदेशी अवलोकनकर्ता बढेसँगै यहाँ होटलको सङ्ख्या पनि बढेको छ । भूकम्पअघि दुई ओटा होटल सञ्चालनमा रहेकोमा भूकम्पपछि सात ओटा थपिएका छन् । बाँस, काठ, छड र जस्तापाताको प्रयोग गरेर नयाँ होटल, रेष्टुराँ तथा लजहरु खुल्न थालेका हुन् । बारपाकको बसपार्क आसपासमा होटलहरु खुलेका छन् । बाँसको प्रयोगले होटल आकर्षक बनाइएका छन् । अधिकांश होटल एक तले छन् । “टहरो मै होटल चलाएँ,” बारपाक&ndas ... बाँकी अंश»
मुस्ताङमा आन्तरिक पर्यटक खचाखच
२०७२ कार्तिक १५ आइतबार, मुस्ताङ । विदेशी पर्यटकको गन्तव्यस्थल बन्दै आएको मुस्ताङमा पछिल्लो समय आन्तरिक पर्यटकको चाप बढ्न थालेको छ । गत वैशाखमा गएको भूकम्प र देशमा जारी आन्दोलनले जिल्लामा विदेशी पर्यटकको चाप घटेको छ । तर आन्तरिक पर्यटकको उपस्थिति उत्साहजनक भएको यहाँका पर्यटन व्यवसायीले बताएका छन् । बिदाको याममा हवाई र स्थलमार्ग हुँदै आउने आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष खगेन्द्र तुलाचनले बताए । ‘जिल्लाको पर्यटन व्यवस ... बाँकी अंश»
चीनको पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रियो
२०७२ कार्तिक १४ शनिबार, धुन्चे (रसुवा)। चीन सरकारले नेपाललाई सहयोग दिने पेट्रोलियम पदार्थमध्ये केही परिणाम आज साँझ नेपाल भित्रिएको छ। प्रहरी नायब उपरीक्षक अवदेश विष्टका अनुसार २७ हजार लिटर पेट्रोलियम पदार्थ अहिले ९:३० बजे रसुवागढी नाकाबाट नेपाल भित्रिएको हो । तीनवटा ट्याङ्करमा भरी ल्याइएको ती पेट्रोलियम पदार्थ कडा सुरक्षाका साथ आज टिमुरेमा राखिने र भोलि बिहान काठमाडौँ पठाइने, बाँकी नौवटा ट्याङ्कर तेल भर्नका लागि भोलि बिहान केरुङ जाने प्रहरी प्रमुख विष्टले जानका ... बाँकी अंश»
नाकाबन्दी र इन्धन अभावका कारण निर्माणधीन १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो अनिश्चित
२०७२ कार्तिक १४ शनिबार, सुनिल शिवाकोटी, हेटौंडा। मकवानपुर भैंसे–६, सानुटार स्थित रहेको निर्माणधीन १४ मेगावाट क्षमताको कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको लगानी र निर्धा्रित समयमा करिब दोब्बर बृद्धि भइसकेपनि विद्युत् उत्पादनको समय भने अझै अनिश्चित छ। आयोजनाको इलेक्टोमेकानिकलतर्फ करिब ६० प्रतिशतमात्र काम पूरा भएको छ। त्यसका लागि आवश्यक करिब ९० प्रतिशत सामान आयोजनास्थलसम्म आइसकेको अवस्थामा बाँकी सामान आयातमा ठेकेदार कम्पनी चीनको जेजुयान जिनलुनले नल्याउँ ... बाँकी अंश»
मधेश आन्दोलनका कारण दुई अर्ब विलम्ब शुल्क विदेशी कम्पनिलाई तिर्नुपर्ने
२०७२ कार्तिक १२ बिहिबार, पर्सा। संविधान संशोधन र सिमाङ्कनको बिरोध गर्दै मधेस केन्द्रित दलहरुले गरेको बन्द हड्ताल तथा भारतको अघोषित नाकाबन्दीको कारण वीरगन्जको सिर्सिया सुख्खा बन्दरगाहमा एक लाख १३ हजार मेट्रिकटन माल बस्तु थन्किएको छ । बन्द हड्तालको कारण बन्दरगाहमा काम गर्ने मजदुरले काम नगर्दा तथा ढुवानीका साधन सञ्चालनमा नआएकाले आयात गरिएका रु १२ अर्बभन्दा बढीका खाद्यान्न, मलखाद, औद्योगिक कच्चा पदार्थ, विद्युतीय उपकरणलगायतका वस्तु बन्दरगाह यार्डभित्र अलपत्र परेको छ ... बाँकी अंश»
एनओसी र पेट्रो चाइनाबीच इन्धन कारोबार गर्ने सम्झौता
२०७२ कार्तिक ११ बुधबार, हरि लामिछाने। काठमाडौँ। चीनसँग दीर्घकालीनरुपमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न सरकारको स्वामित्व रहेको नेपाल आयल निगम र चीनको सरकारी स्वामित्वको पेट्रो चाइनाबीच आज बेइजिङमा सम्झौता भएको छ । यो सम्झौतासँगै नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेशन(आइओसी)बीचको पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकार व्यापार तोडिएको छ भने चीनबाट इन्धन आयातको बाटो खुलेको छ । “आयल निगम र पेट्रो चाइनाबीच इन्धन आयात गर्ने सम्झौंता भएको छ” चीनका लागि नेपाली राजदूत महेश ... बाँकी अंश»
अवैध सुनसहित भारतीय नागरिक विमानस्थलबाट पक्राउ
२०७२ कार्तिक ११ बुधबार, काठमाडौँ। एअर अरेबियाको उडान नम्बर जि ९–५३७ द्वारा मङ्गलबार साउदी अरेबियाबाट नेपाल आएका भारतीय नागरिक सञ्जय गोयन्कालाई प्रहरीले २२८ ग्राम सुनसहित पक्राउ गरेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भन्सार क्षेत्र पार भइसकेपश्चात शङ्का लागी प्रहरीले जाँच गर्ने क्रममा जुत्तामा लुकाई ल्याएको अवस्थामा तीन टुक्रामा रहेको उक्त सुन बरामद भएको थियो । यसैगरी आरए ४०९ को उडानद्वारा हङ्कङबाट काठमाडाँै आएका बेलायती राहदानी भएका नेपाली नागरिक विक्की गुरु ... बाँकी अंश»
लौ आयो पेट्रोलः लिटरको २२५ रुपैयाँ
२०७२ कार्तिक ११ बुधबार, सप्तरी। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल आउन छाडेपछि सप्तरीसहित तराईका जिल्लामा मिसावटयुक्त पेट्रोलको बिक्री, वितरण र कालोबजारीको वृद्धि भइरहेको पाइएको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दी र विगत ७५ दिनदेखि सप्तरीसहित तराईका जिल्लामा जारी बन्दले यहाँका व्यापारीबाट मिसावटयुक्त पेट्रोल पदार्थ बिक्री तथा वितरण गरिरहेको उपभोक्ताले गुनासो गरेका छन् । व्यापारी सीमावर्ती बजार भारतको कुनोली र भीमनगरबाट सस्तो मूल्यमा खरिद गरी सप्तरीको अधिका ... बाँकी अंश»
नाकाबन्दीका कारण दैनिक सवा लाख लिटर दुध उठ्न छोड्यो
२०७२ कार्तिक ११ बुधबार, चितवन। भारतीय अघोषित नाकाबन्दीका कारण दूध डेरीले दूध उठाउन नसकेपछि यहाँका कृषक मर्कामा परेका छन् । दैनिक जिल्लाभरमा दुई लाख २५ हजार लिटर दूध उत्पादन हुने भए पनि डेरीले पालो मिलाएर दैनिक एक लाख लिटर मात्रै उठाउँदै आएका छन् । जसका कारण एक लाख २५ हजार लिटर हाराहारी दूध नोक्सान हुँदै आएको छ । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष हरिहर सुवेदीका अनुसार संविधान जारी भएसँगै झन्डै ३७ दिनयता कृषकको दूध पूरै उठ्न सकेको छैन । यो सबै हिसाबबा ... बाँकी अंश»
इन्धन आयात विषयमा छलफल गर्न नेपाली टोली चीन प्रस्थान
२०७२ कार्तिक ९ सोमबार, काठमाडौँ। चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने विषयमा द्विपक्षीय कुराकानी गर्न उच्चस्तरीय सरकारी प्रतिनिधिमण्डल आज त्यसतर्फ प्रस्थान गरेको छ । भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि मुलुकभर इन्धनको चरम सङ्कट भएपछि वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्ने ध्येयका साथ टोली चीन गएको हो । वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको नेतृत्वमा गएको सो प्रतिनिधिमण्डलले चीनका उच्च अधिकारीसँग इन्धन आयातका विषयमा कुराकानी गर्नेछ । चीनमा रहँदा प्रतिनिधि ... बाँकी अंश»
नाकाबन्दीको प्रभावः व्यवसायी आफैले पुरे २२ लाख चल्ला
२०७२ कार्तिक ९ सोमबार, चितवन। भारतको अघोषित नाकाबन्दीका कारण कुखुरापालक किसानले उत्पादित चल्ला पुर्न थालेका छन् । यहाँ अण्डा उत्पादनमा ठूलो मात्रामा ह्रास आएको छ भने मासु बिक्रीमा ४० प्रतिशतले घटेको छ । नेपाल पोल्ट्री व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष शङ्करप्रसाद कँडेलले चल्ला, अण्डा, मासु र दाना उद्योग धरासायी अवस्थामा पुगेको बताउनुभयो । यस क्षेत्रमा भएको ६० अर्बभन्दा बढी लगानी जोखिम अवस्थामा पुग्ने चिन्ता बढेको उहाँको भनाइ छ । किसानले ब्वायलर चल्ला राख्न छाड ... बाँकी अंश»
चीनबाट अनुदानमा प्राप्त इन्धन ल्याउने अन्तिम तयारी
२०७२ कार्तिक ८ आइतबार, काठमाडौँ। वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले चीनबाट अनुदान प्राप्त इन्धन ल्याउने आवश्यक तयारी भइरहेको बताउनुभएको छ । नेपाल आयल निगमका पदाधिकारीसँगको बैठकका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पुनले एक–दुई दिनभित्रै इन्धन प्राप्त गर्नका निम्ति सबै तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । “अनुदानमा प्राप्त इन्धनलाई कसरी ढुवानी गरी राजधानी ल्याउने भन्नेबारे विस्तृत कागजात बनाएर यो बैठक बसिरहेका छौँ । यसमा राष्ट्रिय खपतको निश्च ... बाँकी अंश»
चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिको उपायबारे छलफल
२०७२ कार्तिक ६ शुक्रबार, काठमाडौँ। सत्ता साझेदार दल एनेकपा (माओवादी) को अगुवाइमा चीनबाट पेट्रोलियमलगायत अत्यावश्यक सामग्रीको आपूर्ति गर्नेबारेमा उच्च तहमा छलफल भएको छ । एमाओवादीका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठको सक्रियातामा शुक्रबार वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गणेशमान पुन, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत वु चुन्ताइ र चीनका लागि नेपाली राजदूत डा महेश मास्केबीच चिनियाँ नाकाबाट अत्यावश्यक सामग्री आपूर्ति गर्नेबारेमा विचारविमर्श भएको हो। “नेपाल–भारत सीमा नाकाम ... बाँकी अंश»
एक लाख ४० हजार लिटर डिजेल काठमाडौँ पठाइयो
२०७२ कार्तिक ४ बुधबार, धनगढी। सुदूरपश्चिमको कैलाली भन्सार नाकाबाट भित्रिएको पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल आयल निगम क्षेत्रीय कार्यालय धनगढीमार्फत आज काठमाडौँ पठाउन सुरु गरिएको छ । कार्यालयका प्रमुख शरद पौडेलले सात ट्याङ्कर डिजेल र एक ट्याङ्कर हवाई इन्धन आज काठमाडौँ पठाइएको जानकारी दिनुभयो । काठमाडौं पठाइएका सात ट्याङ्करमा एक लाख ४० हजार लिटर डिजेल र अर्को एक ट्याङ्करमा २० हजार लिटर हवाइ इन्धन रहेको बताइएको छ । सुदूरपश्चिममा डिजेल तथा पेट्रोलको अभाव कायम ... बाँकी अंश»
Copyright © 2010 - 2020 hamrakura.com. All rights reserved. Developed By : Journey For Tech